CentOS7ဒေသခံ repository (မှန်) | Linux မှ
CentOS7ဒေသခံ repository (မှန်)
dyရာဝတီ | | applications များ, FileLet ရဲ့ UseLinux, FromLinux, ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
သို့ဆိုလျှင် CentOS7ကိုမည်သို့ထင်ဟပ်ပြနိုင်မည်နည်း။ ဤအရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့ထဲတွင်အင်တာနက် bandwidth ကိုသင်သိမ်းဆည်းသည်၊ download လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသင်၏ repositories ၏ local copy တစ်ခုကိုသိမ်းထားသည်။ CentOS နှင့်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ CentOS နှင့်ဆာဗာ ၁၀ ခုသို့မဟုတ်အလုပ်ရုံ ၁၀၀၀ ရှိလျှင် update server အဖြစ်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ မြန်ဆန်စွာ update လုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏ LAN ကွန်ယက်အမြန်နှုန်းဖြင့်သင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သောကြောင့်ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည်သင်၏မှန်ကိုနည်းလမ်း ၁၀ နည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံး၊ သင်၏မှန်ကိုမည်သည့်ဖြန့်ဝေမှုမဆိုပြုလုပ်နိုင်သည် rsync။ ဟုတ်ကဲ့! ဘယ်သူမဆို, သင်သည် rsync အပိုင်းကိုသာဖတ်နိုင်သည်၊ ubuntu, debian, fedora, redhat, slackware တို့ပေါ်တွင် local centOS repository တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အားလုံးက rsync ကိုထောက်ပံ့သည်
rsync ၎င်းသည် compressed and encrypted data များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သော incremental data ကိုထိရောက်စွာထုတ်လွှင့်ပေးသည့် Unix နှင့် Microsoft Windows-type စနစ်များအတွက်အခမဲ့ application ဖြစ်သည်။ Delta encoding နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်ကွန်ယက်ရှိစက်နှစ်ခုနှင့်စက်တစ်ခုတည်းရှိနေရာနှစ်ခုကြားရှိဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်စေရန်၊
ကျနော်တို့ rsync install လုပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့သင်ရုံ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည် CentOS ကြေးမုံ rsync နှင့်အလုပ်လုပ်သောသင်၏နယ်မြေအနီးရှိထင်မြင်ချက်အချို့ (၎င်းသည်ဆဌမကော်လံဖြစ်သည်) Rsync တည်နေရာ
သင် repository ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့် folder တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ငါက isOS နှင့်7GB နေရာယူထားသည့်ရရှိနိုင်သည့် folder အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံသော CentOS 38 ၏မှန်ကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်သည်အခြားဗားရှင်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှန်ကိုပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားပါက centOS သို့မဟုတ်အပြည့်အဝမှန်။ ဘယ်လောက်အထိနေရာယူမလဲဒါဟာသင်အကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။
ဒီ repository မှာဒီဖိုလ်ဒါတွေအားလုံးရှိတယ်။
delete - tag ဖယ်ထုတ်ပြီး - ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖိုင်တွဲများသို့မဟုတ်ဖိုင်များ၊ ဥပမာ iso folder သို့မဟုတ် .iso ဖိုင်များကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။
option ကိုအတူ –Delete, အရင်းအမြစ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးသောဖိုင်များကိုဖျက်လိမ့်မယ်။
-q အသံတိတ် mode က, Non- အမှားမက်ဆေ့ခ်ျဖိနှိပ်
-H ခက်ခဲတဲ့အချိတ်အဆက်တွေကိုသိမ်းထားပါ၊ မင်းအလိုရှိခဲ့ရင်ငါလည်းဒီ option ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ် -l symlinks ကျင်းပရန်
-Delay-updates များကို ဒေါင်းလုတ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးမှာ update လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုထားပါ၊ ခင်ဗျားငါ့ကိုနားလည်သလားဆိုလိုတာကသူဟာဖိုင်အသစ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းမွမ်းမံပေးပေမယ့်အသစ်တစ်ခု ၁၀၀ ကိုပြီးသွားရင်ဖိုင်အသစ် ၁၀၀ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့။ ဖိုင်များကိုသူတို့ကို rsync ထားပါ
rsync: //ftp.osuosl.org/centos/7/ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက CentOS7ကိုပဲလုပ်ချင်တယ်
/ var / www / html / repo / CentOS /7ငါအရင်းအမြစ်မှကူးယူသောငါ၏အဖိုင်တွေအားလုံးကိုထားမယ့်ဘယ်မှာ။
ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါအထုပ်အကြံပြုပါသည် .ရာဝတီ၎င်းသည် http ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုပေးပြီးသင်၏ repository အတွက်အညွှန်းတစ်ခုဖန်တီးသည်
ပြီးရင်ကိုယ့် repository ကိုညွှန်ပြတဲ့ command ကို run လိုက်ပါ
ယခုသင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ဝေမျှရမည်။ ကျွန်ုပ်သည် http server ကိုအမြဲအသုံးပြုသည်။ CentOS7နှင့် ဆက်၍၊ အခြေခံဝဘ်ဆာဗာကိုအောက်ပါအတိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည် (httpd ကိုသုံးပါ၊ ၎င်းသည် Apache မဟုတ်ပါ)
အမှန်တကယ် repository site မှ "www" ဖိုလ်ဒါသို့သင်္ကေတချိတ်ဆက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ကြွသောဆိုဒ်များဖွင့်ထားသောဆိုဒ်များအားလုံးကိုထည့်ရန် httpd.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်သည်
IncludeOptional sites-enabled / * ။ Conf
ServerName repocentos.com ဖြစ်သည်
CustomLog /var/log/httpd/requests.log ပေါင်းစပ်ထားသည်
အမှတ်အသားပြုထားသော link တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကို activate လုပ်သည်
စက်ကိုစတင်ချိန် မှစ၍ web server စတင်ရန်အောက်ပါ command ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်
Web server ကိုအောက်ပါ command ဖြင့်ပြန်ဖွင့်ပါ
[os] အမည် = မာစတာ - အခြေစိုက်စခန်း baseurl = http: //ip သို့မဟုတ် url/ repo / CentOS / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [မွမ်းမံချက်များ] name = master - အသစ်ပြောင်းခြင်း baseurl = http: //ip သို့မဟုတ် url/ repo / CentOS / $ releasever / updates / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [extras] name = master - Extras baseurl = http: //ip သို့မဟုတ် url/ repo / CentOS / $ release / extras / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [centosplus] name = master - CentosPlus baseurl = http: //ip သို့မဟုတ် url/ repo / CentOS / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7
ကျွန်ုပ်တို့သည် repositories ကို:
ကောင်းပြီ၊ အမြဲတမ်းနီးကပ်စွာငါ့ post ကိုနှင့်ဤ website ကိုလိုက်နာရန်သတိရပါ။ မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်လာမည့်အချိန်တိုင်အောင်, ငါတို့အသိပညာမျှဝေ !!!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » CentOS7ဒေသခံ repository (မှန်)
Centos သည်သုံးစွဲသူစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အရင်းအမြစ်တွေကိုဖြုန်းတီးပစ်တာလား။ ငါ Live-usb ကနေတဆင့်စမ်းသပ်ပြီးငါအရမ်းကြိုက်တယ်။
ချစ်ခင်ရပါသော elendilnarsil သည် Fedora ကိုနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအဖြစ် centos များအသုံးပြုသောကြောင့်သင်အများကြီးအလုပ်လုပ်ရပြီး၎င်းသည်အလွန်တည်ငြိမ်သောဆာဗာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂွန်ဇာ Martinez ဟုသူကပြောသည်
Wifi (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ရေငုပ်သမားအချို့သည်ဝက်ဘ်ကင်မရာ၊ (၎င်းတွင်ဆာဗာတွင်အခက်အခဲမရှိသောဒရိုင်ဘာများပါ ၀ င်သောကြောင့်) အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ repo တွင်ကျွန်ုပ်မသိသောအထုပ်များ၊ ကုဒ်နံပါတ်များ၊ ရုံးအလိုအလျောက်ရှိခြင်းကိုမအံ့သြပါနှင့်။ , ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အထုပ်ဟောင်းများ (သို့သော်သံကဲ့သို့တည်ငြိမ်သော)
Gonzalo Martinez အားပြန်ကြားပါ
မင်းနဲ့သဘောမတူဘူး၊ epel နဲ့ nux လိုဒီသို့ထိုးဖောက်တဲ့တရားဝင် repositories တွေရှိတယ် https://wiki.centos.org/TipsAndTricks/MultimediaOnCentOS7
ဆောင်းပါးသွား, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ !!
သင့်တွင် Linux ကွန်ပျူတာအမြောက်အများရှိပါကတပ်ဆင်မှုများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးလက်တွေ့ကျလာသည်။
မင်္ဂလာပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, repo download ကိုငါပယ်ဖျက်နှင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်သလား? ငါဘယ်ကထွက်ခွာ
သံသယဖြစ်ဖွယ်သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ် repo ကို http ဖြင့်သုံးစွဲသည့်အခါ httpd မှ repo ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ပါ
http://172.16.1.9 ငါ Apache စာမျက်နှာကိုရပေမယ့်ငါထားချင်တယ် http://172.16.1.9/??? http အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ရှုရန်။
rsync -avzqlH –delete –delay-updates rsync: …။ အဆင်ပြေတာတောင်မှနောက်မှကူးယူမယ့်နေရာကိုငါထည့်စရာမလိုဘူးလား။
ဥပမာ rsync -avzqlH –delete –delay-updates rsync: …။ / run / မီဒီယာ / miuser / ဒေတာ / repository / centos7 /7/
ဒံယလေက Morales ဟုသူကပြောသည်
ဝဗ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သောဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက်စွဲကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ငါမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Mirror တစ်ခုကို Linux ဖြန့်ချိမှုအမြောက်အများဖြင့်ဖန်တီးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သော Centos, OracleLinux, Debian၊ ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးထည့်သွင်းထားသောဗားရှင်းများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တူညီသော mirror server သိုလှောင်ခန်းကိုဖြန့်ချိမှုနှင့်ဗားရှင်းများစွာကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အမည်နှင့်အခြားဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးသင့်သလား။ ဤ repositories များသည်အလိုအလျောက် update လုပ်ထားသလားသို့မဟုတ်မကြာခဏငါ command ကိုမကြာခဏ run ရမလား။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ မင်္ဂလာရှိသောနေ့
Daniel Morales အားပြန်ပြောပါ
Openfire, Jabber, XMPP နှင့် Tor Messenger သုံး၍ web messaging server တစ်ခုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
သင်၏ Linux Mint သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။